सिंहदरबारका क्यान्टिन मन्त्री, सचिवदेखि सहसचिवसम्मको सेटिङमा सञ्चालन – समावेशी
सिंहदरबारका क्यान्टिन मन्त्री, सचिवदेखि सहसचिवसम्मको सेटिङमा सञ्चालन
आइतबार, माघ २७, २०७५ | १४:५४:३३ |
काठमाडौं । देशकै प्रमुख प्रशासकीय क्षेत्र सिंहदरबार । केही कर्मचारीसँग सेटिङ मिलायो, दुई÷तीन वटा कोठा प्रयोग गरेर क्यान्टिन खोल्यो । तिनले न भाडा तिर्छन्, न त खुवाउँछन् गुणस्तरीय खाना÷खाजा ! तिनकै कारण एकातिर सिंहदरबारको सौन्दर्यमा ह्रास आयो, फोहोरको डंगुर र कवाडी खानामा परिणत हुने खतरा बढ्दै गयो । अर्काेतिर कर्मचारीको स्वास्थ्यमा ‘गडबड’ देखिन थालेको गुनासो चुलिन थालेपछि यस्ता क्यान्टिनउपर सरकार प्रमुखको कार्यालयले ‘एक्सन’ लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार २५ पुसका दिन मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मन्त्रालय र आयोगपरिसरभित्र बिनाप्रतिस्पर्धा सञ्चालित क्यान्टिन हटाउन सबै निकायलाई सर्कुलर जारी गरेको छ । यस्ता क्यान्टिन हेर्ने जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयको हो । परिपत्र गएको १५ दिन बितिसक्दासमेत त्यस्ता क्यान्टिन हटेनन् । सोही कारण ११ माघमा अर्काे पत्र कट्यो । उक्त पत्रमा मन्त्रालय तथा आयोग परिसरभित्र अनुमतिबेगर सञ्चालित क्यान्टिन तत्काल हटाउने निर्देशन छ । जस्तोः संसद् सचिवालयको क्यान्टिन चलाउनेले ७ लाख धरौटी राखेको छ । तर, सिंहदरबारका क्यान्टिनचाहिँ मन्त्री, सचिवदेखि सहसचिवसम्मको सेटिङमा तिनकै निकटले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
बदमासी कस्तोसम्म भने, सिमित भेज आइटममा सम्झौता गर्ने ! सस्तो खाना खुवाउँछु भन्ने । यस्ता सस्ता खाना थोरै बनायो, छिट्टै सिध्यायो र टेण्डरमा उल्लेख नभएका महँगा बफ÷मटन÷चिकेनको परिकार भिडायो ! १५ दिन लगाएर खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्दा यस्तो भद्रगोल भेटिएको हो ।
बुझाइएको प्रतिवेदनमा चमेना गृहपिच्छे आकाश–जमिनको मूल्य अन्तर रहेको, सरसफाइको चरम अभाव, फोहोर थुप्रिएको जस्ता बेथितिका बान्की छन् । १६ वटा क्यान्टिन सञ्चालनमा रहेमध्ये अर्थ, सामान्य प्रशासन र उद्योग मन्त्रालयकाले मात्र स्वीकृति लिएको भेटियो । हाल सेना, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल टेलिभिजनको क्यान्टिन बन्द रहेको, उद्योग मन्त्रालय, संसद सचिवालय, पुनर्निर्माणका क्यान्टिनमा फोहोर र अखाद्य वस्तु पाइएको बताइन्छ ।
अनि सबैभन्दा सस्तो खाना खुवाउने भन्दै खोलिएको कांग्रेस संसदीय दलको क्यान्टिनले अनुमति नै नलिएको रहेछ । यस्तै हालतमा रहेछन्, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, रेडियो नेपाल, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र गृहका क्यान्टिनको हालत पनि उस्तै । सिंहरदरबारभित्र सर्भिस सेन्टरभित्र केन्द्रीय क्यान्टिन रहेकाले अन्य मन्त्रालयमा रहेका क्यान्टिन विस्थापन गर्दै त्यहाँ भीड लगाउने योजना छ । हठात क्यान्टिन हटाइएसँगै उधारोमा खाने कर्मचारीहरुले हाइसञ्चो मानेका छन् भने कतिपय गरिबको रुवावासी छ ।